China BA insimbi engagqwali amashidi Ukwakha kanye Factory | I-Huaxiao
Amandla we-Sino Stainless Steel ngamashidi wensimbi angenasici we-BA, ama-Bright Annealing amashidi wensimbi angenasici
Ububanzi: 100mm - 1500mm, imikhiqizo encishisiwe pls hlola kumikhiqizo ye-strip
Pallet isisindo: 10MT
Insimbi engagqwali Ekhanyayo ne-annealing (BA)
Futhi ingxubevange yethusi ixhuma kalula ngesikhathi sokwelashwa kokushisa. Ukuze uvimbele i-oxidation futhi uthuthukise ikhwalithi yendawo yokusebenza, kufanele ifakwe endaweni evikelayo noma i-vacuum, okuthiwa i-annealing ekhanyayo. Ama-atmospheres avikelayo asetshenziswa kakhulu ekwelashweni kokushisa kwama-alloys ethusi nethusi angumhwamuko wamanzi, ukubola kwe-ammonia, ukushisa okungaphelele kanye nokoma kwe-ammonia, i-nitrogen, i-hydrogen eyomile kanye negesi evutha kancane (noma amanye amagesi avuthayo). Kungakhethwa ngokuya ngohlobo, ukwakheka nezidingo ze-alloy.
Ithusi elihlanzekile nethusi elimhlophe alifakwanga i-oxidized esimeni esibuthakathaka sokunciphisa, futhi livikelwe ngokufanelekile yi-ammonia yomlilo equkethe i-2% H2 noma igesi equkethe u-2% kuya ku-5% H2 no-CO ongaphelele womlilo. Ithusi elimsulwa nalo lingavikelwa umusi. Ukuze uvimbele i-hydrogenosis, lapho ithusi eliqukethe umoya-mpilo linamathiselwe, okuqukethwe kwe-hydrogen esemkhathini wokuvikela akumele kweqe ku-3%, noma ukwelashwa ngokushisa endaweni ene-micro-oxidizing njengoba kuchaziwe ngenhla. Ithusi elihlanzekile lisetshenziswa kabanzi ekunciphiseni i-vacuum. I-bronze equkethe i-aluminium, i-chromium, i-niobium ne-silicon ingafinyelela ukufakwa okukhanyayo kuphela endaweni enciphisa kakhulu. Ukwelashwa kokushisa (ukufaka noma ukucisha) ibronyllium bronze kuvame ukubola ngokubola kwe-ammonia, kepha ingxenye engavundlwanga ye-ammonia akufanele yeqe ngama-20%, uma kungenjalo kungavela izinkinga ze-bubble.
I-Brass enokuqukethwe okuphansi kwe-zinc kungafakwa ngokugqamile, kepha ukufakwa okukhanyayo kwethusi ngokuqukethwe okungaphezulu kwe-15% akukasonjululwa. Lokhu kungenxa yokuthi ingcindezi yokubola ye-zinc oxide iphansi, kanti i-ZnO ingakhiwa kumoya oqukethe igesi encane ene-oxidizing, futhi uma ishisa ibe ngu-450 ° C noma ngaphezulu, i-zinc iqala ukuqeda amandla nokuncibilikisa ithusi. Ukunqoba lokhu kusilela, kungafakwa ngaphansi kwezimo zengcindezi ephezulu. Umoya wokuvikela osetshenziselwa ithusi yigesi engaphelele ngokuphelele, i-ammonia, umusi wamanzi, nokunye okunjalo. Isimo esivikelayo kufanele singabi nesibabule. Umsebenzi wokusebenza udinga ukuhlanzwa ngokucophelela ngaphambi kokulashwa kokushisa, futhi akufanele kube khona uwoyela noma okunye ukungcola ebusweni.
I-2B ne-BA ehlukile
Ipuleti le-BA (Bright Annealing), umehluko ophuma kupuleti le-2B ukuthi inqubo yokuncinisa ihlukile, i-2B isebenzisa inqubo yokuhlanganiswa kokuncanyathiselwa nokukhethwa, kanti i-BA iyamenyezelwa ngaphansi kwemvelo engenawo umoya-mpilo evikelwe i-hydrogen. Inqubo yokugingqika kanye nenqubo yokuqeda le ndawo ehlukile nayo ihlukile.
Ibhodi le-BA alisetshenziselwa ukudweba ngocingo. Uma kuzodonswa, kungaphezu kwamandla nokuchitha.
Ibhodi le-2B ngokuyisisekelo lingaphezulu kwe-mat, futhi into ayibonwa. Ibhodi le-BA licishe lifane nesibuko futhi lingakhanyisa ngokusobala into (unamathisele kancane).
Kokubili i-2B ne-BA kungapholishwa kumapaneli wesibuko we-8K, kepha i-2B idinga izinyathelo zokupholisha ezengeziwe, futhi i-BA ingafinyelela imiphumela ye-8K ngokujikijela okuhle nje. Ngokuya ngomkhiqizo wokugcina, kunokwehluka kokuthi i-BA ipholile noma cha. Eminye imikhiqizo ye-BA ayidingi ukupholishwa futhi isetshenziswa ngqo.
Langaphambilini Amashidi wensimbi angenasici angama-430 abandayo
Olandelayo: NO.4 amashidi ensimbi engagqwali
Ishidi Elingenalutho Lensimbi Engagqwali
Ishidi Elingenalutho Eliphucuziwe
Ishidi Elingenalutho Lensimbi
Ipholishiwe Insimbi Engagqwali Ishidi Lensimbi
Epholishiwe Engagqwali Ishidi Inani
Amashidi Ensimbi Engacwebezelwanga